DEG-DEG: Chelsea Oo Dalab Ka Gudbisay Ousmane Dembele & Fursadda Ay U Haystaan - GOOL24.NET
DEG-DEG: Chelsea Oo Dalab Ka Gudbisay Ousmane Dembele & Fursadda Ay U Haystaan
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa dalab ka gudbisay xiddiga reer France ee Ousmane Dembele waxyar ka hor xilliga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyda ee bisha January.
Xiddiga iska diiday inuu qandaraaska u kordhiyo Barcelona ee Ousmane Dembele oo afar bilood ka hadhsan yihiin waqtiga uu dhacayo heshiiska uu kula jiro Barcelona ayay Chelsea dalab ka gudbisay, waxaanay ku dedaalayaan in saacadda ka hadhsan xilliga uu suuqu xidhmayo ay Barcelona la meel dhigaan heshiis ay laacibkan ku iibsanayaan.
Sida uu qoray wargeyska The Sun, Barcelona ayaa xidhiidh la samaysay 24 jirkan si ay heshiis shaqsi ah ula gaadho, halka Barcelona ay iyadana dhinaceeda kala hadlayso.
Kooxda reer Spain ee Barcelona oo heshiis la gaadhay Pierre-Emerick Aubamayeng ayaa diyaar u ah inay iibiso Ousmane Dembele maadaama uu si xor ah uga tegi doono dhamaadka xilli ciyaareedka, isla markaana ay meel ugu samayso mushaharka xiddiga Arsenal ay amaahda kaga qaadanayso.
Sky Sports ayaa ku warramay in wada-hadallada labada kooxood ee Barcelona iyo Chelsea ay meel fiican marayaan, ayna dhinacyadu u dhow yihiin inay heshiis gaadhaan.
Warka ayaa intaa ku daray, in fursadda ay labada kooxood ay haystaan ay aad u yar tahay xataa haddii ay heshiis gaashaan, sababtoo ah waqtiga heshiiska la qorayo iyo xilliga kama dambaysta ah ee ay tahay in heshiiska loo gudbiyo maamullada LaLiga iyo Premier Legue.